Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo markale dib uga Qarxay deegaano hoostaga degmada Ceel-Afweyn ee gobolka Sanaag. Dagaalka ayaa wuxuu u dhexeeyey labo maleeshiyo beeleed oo wada daga halkaasi, Wuxuuna dagaalku yimid, kadib markii meelashiyaadkaasi ay isku qabteen arrimo la xariira dhul daaqsimeed. Guddoomiyaha gobolka Sanaag, Maxamed Axmed Caalin (Tiinbaro)...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay Sharciga Dhismaha Guddiyada Madaxa-bannaan ee La Dagaallanka Musuqmaasuqa heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay dhibaatada uu musuqmaasuqu ku hayo dowladnimada iyo horumarka dalka, isaga oo xusay in sharcigani uu horseedayo dhismaha Guddiyada...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa 22-ka bishan u amba-baxaya dalka Marykanka, si ay uga qayb galaan Meertada 74-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey. Madaxweynaha ayaa kalmad ka jeedin doona madashan kulminaysa Hoggaamiyayaasha Caalamka, iyadoona meertada 74-aad ee Qaramada Midoobey lagu...
Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland Ilyaas Cismaan Lugatoor Ayaa warbaahinta la wadaagay , in 7 Kamid ah Shaqaalihii dhowaan laga Caydhiyey Garoonka Diyaaradaha ee Hargeisa ay ka shaqo Bilaabeen Garoonka Diyaaradaha magaalada Garoowe. Puntland ayaa sheegtay inay Fursad u tahay in la helo shaqaalle Noocan ah, Islamarkaana ay hada ka Faa’iidaysteen Shaqaalahan,...
Munaasabad lagu kala saxiixanayay hesiis ku aadan Qandaraasyada Raashiinka iyo Shidaalka ee Ciidamada Qalabka Siada ee Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho,taasi oo ay ka qeybgaleen wasiirro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo saraakiil kale. Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed(Amardambe) iyo...
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa go’aansaday inuu ciidamo dheeraad ah u diro dalalka Sacuudiga iyo Imaaraatka kadib weerarkii asbuucii hore lagu qaaday xarumaha shidaalka ee wadanka Sacuudiga. Ciidamadan ayaa qeyb ka ah dadaal lagu doonayo in lagu xoojiyo difaac cirka ee wadamadaasi oo taageerada ka codsaday Maraykanka. Wasiirka Gaashaandhiga Maraykanka Mark...